बेरोजगारी, गाँजा खेती र अर्थतन्त्र | Citizen Post News
बेरोजगारी, गाँजा खेती र अर्थतन्त्र
२०७४ चैत्र ३ गते २२:५०
हिजोआज नेपालबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा युवायुवतीहरु पलायन भइराखेका छन् । जसको राज्यलाई कुनै मतलब छैन् । मतलब छ त मात्र उनीहरुले ज्यानको बाजि लगाएर कमाउँदै पठाएको रेमिटेन्सको हिसाब-किताबमा । त्यही हिसाव-किताबमा सरकार खुशी भएर बसेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्कोतिर भोका नाङ्गा नेपालीको फोटो देखाएर बिदेशी आइएनजओले नेपालको गरिबीलाई उर्जा बनाएर बिभिन्न समाजसेवाको नाममा धर्म परिबर्तनदेखि मुलकलाई अस्थिर बनाई राखेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो–स्वतन्त्र न्याय पालिका माथिको आक्रमण ।
केही बचँखुचँको पढेँलेखेका युवायुवती पनि बिदेशीहरुले चाहे जसरी एनजीओ–आईएनजीओमार्फत प्रयोग भई रहेका छन् । उता नेपालको छिमेकी भारतमा पढेँलेखेका युवा शक्ति भने व्यापार व्यबसायमा लागेको छन् । त्यहि भएर ५० औं लाख भातीयहरु निम्न मध्यमस्तरबाट माथि उठेर मध्यमवर्गमा पुगेको पछिल्लो प्रतिवदेनले देखाउँछ । बितेको एक दशकमा संसारले भारतीय र नेपालीहरुलाई हेर्ने नजर नै फरक बनाएको छ । तर नेपालमा पढेँलेखेका हुने–खानेका छोराछोरी यूरोप–अमेरिका हुँदै गैरसरकारी संघसंस्था र नपढेकाहरु खाडि मुलुकमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।
आजभोली दक्ष जनशक्ति विदेशमा र केटाकेटी तथा बुढाबुढी मात्रै स्वदेशमा बस्छन्, अनि कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ? अब मुलुकको विकास कसले गरेपछि हुने हो ? यदि मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा अघि बढाउने हो भने हामीसँग भएको स्थानीयश्रोत र साधनको व्यापक परिचालन गरी स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सवैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, बिभिन्न सम्भावित क्षेत्र पत्ता लगाई त्यसलाई आयआर्जनको बाटो बनाउँदा मुलुक र जनता दुवैलाई फाईदा हुन्छ । नेपाली जनशक्तिहरु पन्ध्र वीस हजार कमाउन ४८ डिग्रीमा आºनो श्रम बिक्री गर्नुपर्ने व्याध्यताको बिकल्प राज्यले अब दिनुपर्छ ।
गाँजा खेती र अर्थतन्त्र:
नेपालमा प्रचुर मात्रमा सम्भावना बोकेको गाँजा खेती यसको राम्रो उदारण र आयआर्जन गर्न सक्ने विकल्प हुनसक्छ । नेपालको गाँजा संसारभरी हिमालयन मरिजुन्नाको (ज्ष्mबबिथबल mबचष्वगबलब० को नामले प्रख्यात छ । गाँजा धेरै औषधीमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ पनि हो । नेपालको गाँजा संसारभर छुटै टे«डमार्क बनेको छ तर सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
भनिन्छ–कानून समयअनुसार परिबर्तन हुनुपर्छ । आबश्यकताको सिद्धान्तले कानून जन्माउँछ । लागूऔधष (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ (क) २ ले लागूऔषध भन्नाले औषधी उपयोगी गाँजा समेतलाई सम्झनुपर्छ । ऐनको दफा ३ (ग) ले औषध उपयोगी गाँजा भन्नाले गाँजाको निस्कार वा निष्कर्ष सम्झनुपर्छ ।
ऐनको दफा ४ ले निषेध गरिएका कार्याहरु सम्बन्धि व्यबस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४ (क) ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न बिक्री–बितरण गर्न निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार–प्रसार गर्न, संचय गर्न वा सेवन गर्न पाउने छैन् भन्ने व्यबस्था गरेको छ ।
गाउँघरमा गाँजाको बोटको रेसाबाट कपडा, तेल र गेडाबाट अचार बनाउने चलन छ । नेपालको बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा भाङको गेडालाई कोसेलीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा परम्परादेखि नै आयुर्वेदिक औषधीको रुपमा गाँजाको प्रयोग हुँदै आएको छ । चुरोट खाएमा क्यासर हुन्छ भने गाँजालाई क्यान्सरको औषधीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । भारतमा बाबा रामदेवको कम्पनीले गाँजाजन्य औषधीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान थालेको छ । भारतमा पनि गाँजा प्रतिबन्धित छ । तर औधोगिक व्यबसायको लागि ईजाजत लिएर उत्पापदन गर्न सक्ने व्यबस्ता छ ।
नेपालीको गाँजाको परम्परागत ज्ञान बिदेशीको हातमा जान सक्ने अबस्था आएको छ । गाँजालाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो परंपरागत ज्ञान बिदेशीले अपनाउन थालि सके । भोली उनीहरुले हाम्रो परम्परागत ज्ञान उनीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिमा दर्ता हुनेछ । त्यसबाट हामीले ठुलो मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछौं । अब राज्यले कति पनि ढिला नगरी गाँजाको पेटेन्टलाई सुरक्षित गर्नु अति नै आबस्यक छ । बैद्य खानाले गाँजाबाट बिभिन्न प्रकारको औषधीहरु बनाउँदै आईरहको थियो । यसले यौन शक्तिलाई बढाने काम गर्ने भएको हुँदा यसलाई ‘नेपाली भेएग्रा’ पनि भनिन्छ । विगतमा बैद्य खानाले गाँजाबाट भोग सुन्दरीको उत्पादन गरी बिक्री बितरण गर्ने गरेको थियो ।
गाँजा प्रकृतिको बरदान हो । पशुपतिनाथको देशमा शिब रात्रिमा ठुलो मेला लाग्छ । लाखौं तिर्थयात्रीहरु यहि मेला भर्न देशबिदेशबाट आउने गरेका छन् । यो मेलाको आकर्षक गहनाको रुपमा भारतीय बाबाहरुलार्ई लिइन्छ । तर यस बर्षदेखि पशुपति क्षेत्रमा गाँजा निषेध गरिएको छ । धेरै बाबालाई गाँजा खाएको भनेर मुद्धा समेत चलाईयो । यसले शिबरात्रीमा आउने बाबाको कमि भई शिबरात्रीको महत्व घट्ने र कालन्तरमा यसले हाम्रो संस्कृतीमा ठुलो असर पुग्ने देखिन्छ ।
गाँजा संस्कृती र नेपालको पर्यटनः
नेपालमा १९७० को दशकलाई हिपीको युग भनिन्थ्यो । यहाँ संसारभरबाट गाँजा सेवन गर्न पर्यटकहरु आउने भएकाले अमेरिकाले नेपालको टुरिजम ब्यवसायलाई नै धरापमा पार्न तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई दबाद दिई लागूऔषध ऐन, २०३३ जारी गरि गाँजालाई बन्देज लगाउन सफल भयो । त्यसभन्दा अगाडि इजाजत लिएर गाँजा खेती गर्दै आएको थियो । त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र धेरै नै बलियो थियो । १ डलरको १६ रुपैयाँ हुन्थ्यो, हाल १०२ रुपैयाँ छ ।
अमेरिकाले हयितार बिक्री गर्न हुने हामीले औषधीको रुपमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको व्यापार गर्न किन नपाउने ? यो कस्तो खालको व्यापार निति हो ? सन् २०१७ मा मात्रै बिश्वमा ८ अर्ब डलरको गाँजाको कारोबार भएको देखिन्छ । नेदरल्याडको एम्सेड्यामलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै गाँजा र सेक्स टुरिजम हो । बैज्ञानिकहरुले यसको उपयोग पुष्टि गरेपछि हाल अमेरिका, क्यानाडा र यूरोपेली मुलुकहरुमा गाँजाको प्रयोग खुल्ला गरेसँगै यसको व्यबसाय फस्टाउन थालेको छ ।
जसको दबावमा गाँजा खेती बन्द गरिएको हो उसको देशमा नै खुल्ला भइसकेको अबस्था छ भने अब नेपाल सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति बनाएर व्यवसायीक खेतीगरी त्यसको पैठारीको लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा हजारौ वेरोजगार युवाले रोजगारी पाउने मात्र नभई मुलुककै अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण साध्य हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्ने कि ? लेखकः अधिवक्ता हुन । Email:advocate.subash@gmail.com